အမွေd- Teles Relay
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် »အမွေအနှစ်
ဒီဟာခြောက်လရှိပါပြီ မင်းသမီး Anemone သူမ၏နောက်ဆုံးအသက်ရှုစေတော်မူပြီ. မင်းသမီးသည် 68 the 30 April 2019 တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ကြာမြင့်စွာနာမကျန်းပြီးနောက်။ ဒါဟာကျနော်တို့အတွက်လေးစားနိုင်ကြောင်းတပုံရသည် ရုပ်ရှင်Santa Claus သည်အမှိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်" သူ၏တစ်သက်တာအတွင်းကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များရှိခဲ့သည်။ Anemone သည်သူ၏ရန်ပုံငွေများအပါအ ၀ င်သူ၏ဘဏ္finာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်သတိပညာရှိမည်ဖြစ်သည် Le Matin သတင်းစာမှကျွန်ုပ်တို့၏ဆွစ်ဇာလန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များထံမှဖွင့်ဟချက်များ.
သူတို့အဆိုအရဖက်ဒရယ်အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုကဖော်ပြခဲ့သည် မင်းသမီး "ဆွစ်ဇာလန်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဘဏ်အကောင့်ရှိခဲ့ပါတယ်"။ AFC မှာရှိတယ် Anemone ရဲ့အမွေဆက်ခံသူတွေကိုအယူခံဝင်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အသိပေးချက်များလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုထားသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကိုခန့်အပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Le Matin ၏အဆိုအရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီများတောင်းခံမှုကို Federal Gazette တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Anne Bourguignon ၏သားသမီးများမှာယာကုပ်နှင့်လီလီဖြစ်သည် ထို့ကြောင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအကူအညီများမှအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန် ၁၀ ရက်ကြာပြီးနောက်မိခင်၏ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်ရန်မျှော်လင့်ပါ။
"အလုပ်မလုပ်ဘဲနေရန်လုံလောက်သော" အငြိမ်းစားအမျိုးသမီးတစ် ဦး
သူမ၏ပွင့်လင်းရိုးသားမှုကြောင့်လူသိများသည် Anemone သူမထင်သောအရာကိုပြောရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ပိုက်ဆံနှင့်ပတ်သက်။ Le Parisien မှ 2017 တွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်၊ မင်းသမီးကသူမရဲ့ပင်စင်လစာကိုစစ်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် "ဒါငါ့ရဲ့အနားယူခြင်းနဲ့အလုပ်မရှိဘဲဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာပဲ။ သူမအရမ်းအဆီမဖြစ် ကံကောင်းတာကငါဝင်ငွေအခြားနေရာများတွင်ငှားရှိသည်"။ အကယ်၍ သူမထိလိုက်သောငွေပမာဏကသူမအားအသက်ရှင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကသူသည် Anemone ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ "ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအလုပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကျနော်တို့အငြိမ်းစားအတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး"သူမကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အင်တာဗျူးတွင်စဉ်အတွင်းကဆက်ပြောသည်။
PHOTOS ။ Cindy Crawford: သမီးလေး Kaia Gerber နှင့်သူမ၏မိခင်နှင့်အတူအနီရောင်ကော်ဇောတွင်သူမ၏ချစ်စရာကောင်းသောမိသားစုပြန်လည်ဆုံဆည်းမှု
အချမ်းသာဆုံးသောပြင်သစ်စကားပြောအာဖရိကန်နိုင်ငံများစာရင်းတွင် Forbes မဂ္ဂဇင်းသည်အိုင်ဗရီကို့စ်၏နေရာများဖြစ်သည်
သိကောင်းစရာများ - အားလုံးအတွက် 25 DIY SOAP IDEAS များ
Susan Sarandon ကသူမရဲ့နှာခေါင်းကိုချိုးဖဲ့ပြီး Bernie Sanders - လူတွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်
Amazon ရောင်းချမှုသည် 8 000 ထက်ပိုမိုသော5ကြယ်ပွင့်များနှင့်အတူနားကြပ်များကို 49,99 $ - BGR မှဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Sonia Rolland: Jalil Lespert, Christophe Rocancourt ... သူ့ဘဝမှာဘယ်သူတွေလဲ။
Duchess of Cambridge ကသူမရဲ့ဖက်ရှင်သူဌေးကိုပါကစ္စတန်ကိုသမိုင်း ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်သူမကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောစာတစ်စောင်ကိုပို့ခဲ့သည်